ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 28.1 တို့ကလဲ အံတိုနေပြီဟေ့
ကားသမားက လမ်းပေါ်မှ လူ ကို တိုက် မလို ဖြစ်သွားသည်. ဒေါသထွက် သွား သော ကားဆရာ က. ဟေ့လူ။ ကားမမြင်ဘူးလား။ ဆိုတော. လမ်းပေါ် ကလူ ကလည်း အခု မှ လမ်းပေါ် တက် တာ မဟူတ်ဘူး ကိုယ့်လူ လို.ပြန် ဖြေပါသတဲ့။
အို .အသက် ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာဘဲ.။ ဘယ်တုံး ကရိုက်ထားတာလဲဟက်။
ဟုတ်တယ်။ မအယ်တက်တုန်းကလည်း ဆယ်တန်းအောင်စ ကလေးတွေနဲ့ မို့တစ်ယောက်က အန်တီခေါ် လို့ ဆရာကပါ အန်တီတဲ့။